Ahoana ny fomba hampiasana ny Siri nefa tsy miteny hoe "Hey Siri" miaraka amin'ny fiasa vaovao "Asandrato hiresaka" ao amin'ny beta an'ny watchOS 5 | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny fihaonamben'ny mpamorona farany dia nianatra momba ny fiasa izay, voalamina tsara isika, afaka manampy antsika amin'ny famokarana ny Apple Watch. Izany no fiasa «Raise To Speak »izay amin'ny teny espaniola dia midika hoe« Miakara miteny ». Miaraka amin'ity asa ity, Hisy Siri afaka hampiasaina nefa tsy hanery bokotra akory.
Tsy nisy io endri-javatra io rehefa nivoaka ny Apple Watch beta voalohany ary tsy nahita dianay koa izahay tamin'ny Apple Watch beta faharoa. Fa satria ny fanovana ny Siri dia tsy mitaky fanovana kinova, ny zava-drehetra Toa ny Apple dia nanakodia an'io endri-javatra io tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Raha manana beta napetraka ianao ary te-hizaha raha manana ny fampiasa dia azonao atao ny manandrana izao manaraka izao:
Mandehana amin'ny fiasa General-Siri-Siri.
ankehitriny tsy maintsy ataonao izay hampavitrika ny lahasa "asandratra hiteny".
Na izany aza, tsy ny mpampiasa rehetra no nampandeha azy tamin'ny fotoana nanoratany ilay lahatsoratra, na eo aza ny mazoto amin'ny interface. Mahareta fa hampidirina tsikelikely ho an'ny mpampiasa beta rehetra izy ireo.
Aorian'ny fampandehanana azy, ny fandidiana dia tsotra toy ny hafa rehetra avy amin'ny Apple. Atsangano amin'ny fihetsika mitovy aminao ny sandrinao mba hanamarinana ny fotoana. Rehefa mandeha ny efijery dia miresaha amin'i Siri. Raha marina ny zava-drehetra Siri dia tokony hihaino izay lazainao ary hanome anao ny valiny mety. Teboka iray monja: tsy maintsy nampavitrika ny fiasa ianao hampavitrika ny Apple Watch rehefa manangana ny sandry hahitana ny fotoana.
Amin'ity safidy ity dia manakana ny Siri tsy hifandray amin'ny famantaranandro tsy nahy isika, raha ny tena izy dia tadiavinay hampodina azy amin'ny fitaovana hafa, toy ny amin'ny iPhone na HomePod. Etsy ankilany, ny lafiny ratsy dia ny fampidirana an-tsitrapo amin'ny toe-javatra izay tena tsy tena ilaintsika ny mampihetsika an'i Siri, ary ny mpanampy kosa dia mandray ny heviny amin'ny "fandikana maimaim-poana" azony atao amin'ny fampahalalana henony.
Fitaovana tena ilaina tokoa ho an'ny maro izy io, saingy tsy maintsy mianatra mitantana azy isika mba hanampiana antsika isan'andro. Hankafizako azy, Tokony hanana ny watchOS 5 beta napetraka amin'ny Apple Watch Series 1 na avo kokoa isika. Mariho fa rehefa apetraka dia tsy mamela anao hiverina amin'ny kinova teo aloha ny watchOS. Amin'izay dia tombano eo aloha izay kasainao hatao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hampiasana ny Siri nefa tsy miteny hoe "Hey Siri" miaraka amin'ilay fampiasa "Asandrato hiresaka" vaovao ao amin'ny watchOS 5 beta
Ny valiny ara-bola Q3 2018 an'ny Apple dia hatao amin'ny 31 Jolay